Ugu Weyn Ee Rowan
Waa maxay macaanka waxtarka leh ee ka mid ah midhaha casaanka casaanka ah
Rowan ma aha oo kali ah heesaha, laakiin sidoo kale daawada, qurxinta iyo xitaa wax karinta. Laga soo bilaabo ay berry cas guduud ah oo soo baxday macaan oo aad u fiican, taas oo ku guuleysan doona qalbiga gommets leh caraf udgoon leh iyo dhadhanka jilicsan, iyaga ku sasabashada leh midabkooda dhalaalaya. Nadaafad noocan oo kale ah waa badeecooyin cunto aad u faa'iido badan oo fitamiinada iyo macdanta, taas oo ay ugu wacan tahay waa daaweyn dhab ah oo waxtar leh oo loogu talagalay dadka ku cunta cuntada.
Sidee loo kariyaa khamriga khamriga guriga
Roob khafiif ah ayaa ku kordhay dhammaan Yurubta, Aasiya iyo Waqooyiga Ameerika. Burushka casaan-guduudan ayaa nagu raaxeysta ra'yigooda laga bilaabo Sebtembar ilaa dhaxan. Rowan waxay qurxisaa jardiinooyinka magaalada iyo labajibbaarada, waxaa laga helaa kaymaha iyo goobo gaar ah. Marka lagu daro quruxda dibadda, mid ka mid ah siyaabaha loo isticmaalo - khamriga roodhida ee guriga.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Rowan 2019